प्रविधि - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
सबैभन्दा लामो समुद्री पुलको मुख्य संरचना ७ वर्षमा निर्माणसम्पन्न
हङकङ, जुहाइ र मकाउलाई जोड्ने सबैभन्दा लामो समुद्री पुलको मुख्य संरचना निर्माणसम्पन्न भएको छ। २९.६ किलोमिटर लामो सो संरचना सात वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको हो।
अब कम्प्युटर प्रणालीमा जाँदै केयुकेएलः जुनसुकै कार्यालयबाट महसुल तिर्न सकिने
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लि (केयुकेएल) आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्तै कम्प्युटर प्रणालीमा जाने भएको छ।
एचआइभी संक्रमण नहुने शिशुको जन्म गराएको चिनियाँ बैज्ञानिकको दावी
१२ मंसिर -
११ मंसिर - मंगल ग्रहको विस्तृत अध्ययनका लागि नासले पठाएकाे अन्तरिक्ष यान ‘इनसाइट ल्याण्डर’ मंगल ग्रहमा सफल अवतरण गरेकाे छ। नेपाली समयअनुसार साेमबार मध्यराति ‘इनसाइट ल्याण्डर’ मंगलमा अवतरण गरेकाे हाे।
मंगल ग्रहमा वैज्ञानिकहरुको यतिविघ्न चासो किन?
१० मंसिर -
व्यापार युद्धसँगै ‘प्रविधि क्रान्ति’ को प्रतिस्पर्धामा चीन र अमेरिका
९ मंसिर -
एप्पलको सेयर कमजोर हुनुका कारण
६ मंसिर - अमेरिकी बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी एप्पलको सेयर केहि समययता कमजोर बन्दै गएको छ।
काठमाडौँ १ मंसिर - वैज्ञानिकले किलोग्राम ‘केजी’को परिभाषा परिवर्तन गरिदिएका छन्। पचास भन्दा बढी देशले परिभाषा परिमार्जन गरेर नयाँ परिभाषा निर्माणगर्न सर्वसम्मत मन्जुरी दिएका हुन्।
‘सौर्य मण्डल बाहिर भेटियो अर्को ग्रह’
२९ कार्तिक - खगोलशास्त्रीहरुले सौर्य मण्डल बाहिर ग्रह भएको पत्ता लगाएका छन्। सूर्यदेखि नजिक अर्को एक तारा ‘बरनार्ड स्टार’ नजिक वैज्ञानिकहरुले त्यसको छुट्टै ग्रह फेला पारेका हुन्। सौर्य प्रणालीमा सूर्यका आठ ग्रहहरु छन्।
चन्द्रमापछि कृत्रिम सूर्य बनाउँदै चीन
२८ कार्तिक - गत महिना कृत्रिम चन्द्रमा बनाउने घोषणा गरेको चीनले त्यसको केहि समयमै कृत्रिम सूर्य बनाइरहेको खुलासा गरेको छ।
चीनमा अब रोबर्टले पढ्नेछ टिभी समाचार
२५ कार्तिक - टेलिभिजन स्टुडियोमा बसेर रोबोटले समाचार पढिरहेको दृश्य आफैँमा एउटा अपत्यारिलो घटना हो।
नासाको अन्तरिक्ष यान सूर्यको नजिक
१३ कार्तिक - अमेरिकाको ‘सूर्य छुने’ साहसिक अभियान ‘टच द सन’ अन्तर्गत नासको रोवोटिक अन्तरिक्ष यान सूर्यको नजिक गइरहेको छ।
सूचना सुरक्षित राख्न नसकेको भन्दै फेसबुकमाथि करोडौं जरिवाना
८ कार्तिक - सूचना सुरक्षित राख्न नसकेको भन्दै फेसबुकलाई ७५ करोड ६५ लाख जरिवाना गरिएको छ।
काठमाडौं ३१ असोज - बुधबार बिहानैदेखि विश्वभर यू-ट्युब सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान भएको छ।
काठमाडौं २७ असोज - विश्वकै सबैभन्दा चर्चित सामाजिक सञ्जाल कम्पनी फेसबुकले आफ्ना करिब २ करोड ९० लाख प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणमा ह्याकरको पहुँच रहेको जनाएको छ।
२५ असोज - जर्मनले विश्वमै पहिलो पटक हाइड्रोजन रेल सार्वजनिक गरेको छ। गत सोमबारदेखि जर्मन यात्रुहरुले हाइड्रोजन ग्याँसलाई इन्धनका रुपमा प्रयोग गरिएकाे रेलमा सफर गर्न पाएका हुन्।
क्यालिफोर्निया १३ असोज - विश्व चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका ५ करोड अकाउन्टमाथि ह्याकरले आक्रमण गरेका छन्।
काठमाडाै‌ं ११ असोज - वेलायतको एक उपग्रहले पृथ्वीको कक्षमा जाल विछाएको छ। जसले अन्तरिक्षको फोहर बटुल्ने जनाइएको छ। परीक्षणका लागि सुरु गरिएको यस कोशिस अनुसन्धानको एक हिस्सा हो।
पैसा तिरेर अब चन्द्रमामा घुम्न जान पाइने
२ असोज - चन्द्रमामा घुम्न जान इच्छुकहरुका लागि ‘स्पेस एक्स’ एरो स्पेस कम्पनीले नयाँ सुविधा लिएर आएको छ। अब मानिसले चन्द्रमा पैसा तिरेर भ्रमण गर्न पाउनेछन्।
नासाको लेजर उपग्रह प्रक्षेपण, हिउँ र समुद्री सतहको अध्ययन गर्ने
३१ भदौ - अमेरिकी अन्तरिक्ष विज्ञान संस्था (नासा) ले पृथ्वीको सतहबाट हिउँ पग्लनेक्रम र समुद्री सतहको उचाइमा भइरहेको वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न शनिबार अत्याधुनिक लेजर उपग्रह प्रक्षेपण गरेको छ।
एप्पलले ल्यायो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट ‘तीन आइफोन’ र ‘स्मार्ट वाच’
२८ भदौ - अमेरिकी स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले एकै पटक तीन किसिमका आइफोन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ।
विश्वभर सुख्खा र बाढी ल्याउने ‘एल निनो’ को प्रभाव फेरि देखिँदै
२६ भदौ - विश्व मौसम संगठनले मध्य पुसअघिनै ‘एल निनो’ मौसम पुनः शुरु हुने संभावना अत्याधिक बनेको जनाएको छ।
फेसबुकले एसियामा पहिलो डेटा सेन्टर स्थापना गर्दै
२४ भदौ - सामाजिक सन्जाल फेसबुकले एसिया महादेशमा पहिलो पटक डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ।
गुगल आएपछि सबै सर्च इन्जिन अर्थविहीन
काठमाडौँ २३ भदौ - तपाईंलाई कुनै प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ? कुनै कुरा बुझ्न समस्या छ? अथवा नयाँ जानकारी चाहिएमा के गर्नुहुन्छ? अधिकांश व्यक्तिले सम्भवत् गुगलको सहायता लिन्छु भन्ने उत्तर आउँछ सबैको। किनभने गुगल अब हाम्रो जीवनको महत्वपूर्ण अंग बनिसकेको छ।
नेपालको सीमा नजिकै शक्तिशाली टेलिस्कोप जडान गर्दै चीन
काठमाडौँ २१ भदौ - चीनको तिब्बतस्थित विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका अधिकारीहरुले नेपाल सीमा जोडिएको तिब्बततर्फको हिमाली क्षेत्रमा विश्वकै उच्च क्षमता भएको सव मिलिमिटर वेब टेलिस्कोप निर्माणमा जोड दिएका छन्।
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ र ‘हाम्रो पात्रो’ सहकार्यमा
काठमाडौं २० भदौ - विश्वकै चर्चित गायन रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ’ को नेपाली संस्करण ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ अब नेपालको सबैभन्दा बढी डाउनलोड भएको जीवनशैली एप ‘हाम्रो पात्रो’ मा प्रत्यक्ष हेर्न पाइने भएको छ।
अमेजोनले ल्यायो हिन्दी भर्सनको वेबसाइट र एप
२० भदौ - अमेरिकी अनलाइन कम्पनी अमेजोनले हिन्दी भाषाको वेबसाइट र एप ल्याएको छ।
एनटिसी मोबाइलमा देखिएको समस्या समाधान
काठमाडौं १९ भदौ - नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवामा बिहानैदेखि देखिएको समस्या समाधान भएको छ।
एप्पलको चालकविहीन कार दुर्घटनाग्रस्त
१६ भदौ - विश्वव्यापी ब्राण्ड एप्पलको एक चालकविहीन कार दुर्घटनामा परेको छ। अमेरिकी राज्य क्लालिफोर्नियाको बाटोमा यात्रु बोकेको कार दुर्घटनामा परेको हो।
काठमाडौँ १४ भदौ - फेसबुकले विश्वभर आफ्नो पाँच भिडियो–स्ट्रिमिङ सेवा सुचारु गर्न गइरहेको जनाएको छ। अमेरिकामा भने यस सेवा एक वर्ष अघिदेखि नै चलिरहेको छ।
चन्द्रमामा पानी रहेको पुष्टि
६ भदौ -
अमेरिकाविरुद्ध रुसी ह्याकरको साइबर आक्रमण प्रयास बिफलः माइक्रोसफ्ट
वासिङटन ५ भदौ - अमेरिकी कन्जरभेटिभ समूहमाथि रुसी ह्याकरद्वारा भएको साइबर आक्रमण बिफल पारिदिएको अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी माइक्रोसफ्टले जनाएको छ।